Nkebi nke 1: Apple si Radio Service: Beats1
Part 2: More gbagwojuru redio ụgbọ nwere ike-abịa ngwa ngwa
Nkebi nke 3: Olee otú ige ntị Apple music redio online
Apple Music ngwa ma ọ bụ iTunes Music ngwa bụ otu n'ime ọhụrụ na kasị ewu ewu na music gụgharia ọrụ na-abịa na ụfọdụ amamiihe atụmatụ na functionalities. Nke a music ọrụ bụ a bara uru ikpo okwu maka music ndị hụrụ ndị n'anya na-ege ntị na chọpụtara music si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Otu nke kasị mma atụmatụ nke Apple si music ngwa bụ nke ya n'anya raara onwe ya nye redio ọrụ nke a maara dị ka Beats1. Site n'iji ya gee ntị n'ime Beats1, ị nwere ike ịnweta ndụ redio si gafee ụwa na ọsịsọ n'ime curated redio ụgbọ dabeere na gị mmasị na masịrị na music.
Beats1 bụ otu nke kasị mma na redio ụgbọ na bụ otu onye nke na Zane Lowe na ya handpicked ìgwè ndị a ma ama djs-emepụta ihe Eclectic mix nke kasị mma na nke kasị ọhụrụ music. Ọ na-agbasa ozi music 24/7 100 mba si ya nka na-emi odude ke New York, Los Angeles na London. Nke a bụ ikpo okwu pụtara n'ihi na-aga n'ihu redio mmemme na-arụ ihe niile si ochie akwụkwọ hip iwuli elu ka futuristic pop. The akpali ihe banyere ọrụ a bụ na onye ọ bụla song egwuri na-handpicked site music ọkachamara. Apple Radio ọrụ nwere ike ịbụ gị onye music redio ọrụ, n'agbanyeghị ebe ị nọ na ihe ị na-eme. Ime ka ọtụtụ n'ime ya.
N'ihi na music ndị hụrụ ndị n'anya echiche nke Apple 'Beats1 music ọrụ, e nwere ozi ọma na Apple nwere ike n'oge na-adịghị-launching ise ọzọ gbagwojuru redio ụgbọ. E nweghị obi abụọ banyere eziokwu ahụ bụ na e kere eke nke Beats1 redio bụ ihe kasị mma banyere Apple music na ngwa na eziokwu na ụlọ ọrụ na-abịa na ndị ọhụrụ na-abịa dị ka onye ozi ka mma ọbụna. Ọ bụrụ na asịrị ndị na-kweere, mgbe ahụ, aha nke na-abịa 5 ọhụrụ na redio ụgbọ ga-Beats2.com.cn, Beats2.hk, Beats3.sg, Beats4.com.ru na Beats5.com.cn. Ọbụna ndị ọzọ na redio ụgbọ nwere ike na-abịa mgbe ndị a 5 na-oru.
Apple Music redio-enye gị ohere ntị gbagwojuru 1 nke bụ Apple mbụ mgbe 24/7 n'ụwa nile redio. Nke a redio ike ga-eji na iPhone, iPad, iPod aka, Mac ma ọ bụ PC. Ọ bụghị nanị na ọ na-enye gị nweta gbagwojuru 1 kamakwa ina redio ụgbọ nke na-karịsịa curated maka dị ka gị uto ke music. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-ege ntị Apple Music redio online mgbe ahụ ị pụrụ ịgbaso nyere n'okpuru nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: nzọụkwụ mbụ bụ iji hụ na gị iOS ngwaọrụ nwere version iOS 8.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ, ị ga-akpa chọrọ imelite gị iOS ngwaọrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na i nwere Mac ma ọ bụ PC, mgbe ahụ, ị ga-mkpa iji hụ na ị nwere iTunes version 12.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ị ga-nwere nti Apple ID n'ihu n'ihu.
Nzọụkwụ 2: na-ege ntị Apple music redio na ngwaọrụ gị, mbụ ị mkpa enweta na Music App.
Nzọụkwụ 3: mgbe a, i kwesịrị enweta na Radio taabụ nke ga-nyere na ala nke ihuenyo. Ọ bụrụ na ị na-jụrụ banye na, mgbe ahụ, ị ga-gị banye Apple ID.
Nzọụkwụ 4: ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na-ege ntị Apple Music Radio na gị Mac ma ọ bụ PC, mgbe ahụ, ị chọrọ na-akpa-emeghe iTunes na mgbe ahụ si igodo mmanya nyere n'elu iTunes, họrọ redio. I nwere ike jụrụ gị banye Apple ID n'ihu.
N'ihi ya na n'elu nyere nzọụkwụ ị pụrụ ịnụ ụtọ na-ege ntị Apple Music Radio online.